Namuhla, ungenza ukuthenga ngezindlela eziningi. uhambo Hhayi okwamanje akusebenzi emakethe noma izitolo, kodwa kakade ngokuqinile iwine izikhundla zawo yezitolo online.
Njalo Omuny ezinhle uyohlale ukuthola indlela, indlela ungagcina imali kwi ukuthengwa kwezimpahla ezihlukahlukene. Omunye izinqumo yakudala ukuthenga wholesale, okuyinto, sibonga inani izihloko atholwe eziningana konga imali. Kodwa kungani omndeni owodwa, ezifana amafriji ezinhlanu? Lokho ukuba baxazulule izinkinga ezinjalo lapho uthenga izimpahla kwi-Internet, kubalulekile ukuqonda ukuthi lokhu kuwumsebenzi ohlanganyelwayo.
Efuna wokufunda ukuthi kuwumsebenzi ohlanganyelwayo, udinga kuqala unake isifinyezo - izincwadi ezimbili ezinkulu futhi bamele umqondo. JV - ukuthenga joint, okuyinto kungenzeka benziwa licembu lebantfu ukuthengwa kwezimpahla ezithile ukuze songe imali yabo. Zibambisane ukuze kuthengwe ezihlukahlukene izimpahla brand, kodwa kuqala namanje kangcono ukwazi inikeza ilungelo isitolo inthanethi izaphulelo kuma ukuthenga ngobuningi noma cha.
Kanjani ukuthola abantu
Ngakho, uma usunayo isifiso oda umkhiqizo othize, ngathola indawo lapho ungakwazi ukukwenza ngemali ephansi kwesokunxele ukuqoqa inani elidingekayo kwempahla abantu. Kuphi lokhu kungenziwa? Indlela elula kunazo yokucacisa ukuthi inikeze ulwazi esithangamini ezifanele ukuthi unethuba bathenge izimpahla ngentengo ephansi, futhi lapho ukuthola abantu. Kodwa kumelwe ke kumelwe kulungiselelwe ukuchaza lokho kuwumsebenzi ohlanganyelwayo, ukukhuluma ngezinzuzo ngobuningi wokuthenga kanye ezihlukahlukene benze abantu bakholwe. A option omkhulu kungaba ukubamba iqhaza kwemiphakathi thematic, ezifana Club of omama abasebasha noma ochwepheshe abasebasha. Thola abantu abanazo phezu lokuthenga lomkhiqizo kuyoba lula ngisho. Futhi ungakwazi nje ukuphonsa umlayezo ukuxhumana nomphakathi futhi abuthele abangane bakho nayejwayelene ukuthenga wholesale kwezimpahla.
Ukuhlaziya lokho kuwumsebenzi ohlanganyelwayo, kuhle ukucabangela uhlangothi ukuthenga ambalwa ungakhululekile noma eyingozi ngokuhlanganyela. Yini embi ngalo endaweni yokuqala iwukuthi kungase ukuqoqwa inani elidingekayo labantu lulibala, ngakho uthole namuhla izimpahla, kusasa akunakwenzeka, ngezinye izikhathi inqubo imisiwe inyanga yonke, mhlawumbe nangaphezulu. Sinking konke ukuthenga inthanethi ukuthi ungathola impahla izinga ingafaneleki. Futhi ukuze bazivikele kulezi zimo kuyoba nzima kakhulu, ngoba ngezinye izikhathi izimpahla kusukela nomthengisi ukuze ikhasimende kufika cishe amasonto amabili, okungukuthi yelula yinkathi izimpahla lungabuyiselwa umdayisi yokungathembeki. Futhi ingozi enkulu lapha imikhonyovu ezihlukahlukene ezingaba ukuhlela kulingwa okuhlukahlukene ngokuhlanganyela: izingubo, usule izinto zikagesi eziphezu, umntwana imikhiqizo, njll Kubalulekile okungenani ngezinga ithemba ngezinga indoda abayokwakha ukuthengwa jikelele ngoba ngaphambili kwakuyodingeka ukuthumela imali ukubeka umyalelo lonke iqembu labantu.
Savings kumele kube ukonga
Njengoba abaningi njengoba kuyoba lokususa at JV imikhiqizo ngendlela ngokuhamba kwesikhathi ithengwe kaningi. Nsuku zonke inqwaba abantu bathenga izimpahla wholesale ngale ndlela, ukuthola kusuka kule njengoba ukwaneliseka ezingokomoya nezingokwenyama.
Uhlobo luni lwezinto ezibonakalayo yi-Nubuck? Izinhlobo, izici nokubuyekeza. I-Nubuck - impahla yezicathulo
Typology amasistimu kwezombangazwe njengesilo isayensi